Ny fakan-tsarin'i Google dia hampiditra fitifirana mahery vaika | Androidsis
Mandeha ny resaka fa ny Nexus vaovao avy amin'ny LG sy Huawei, miaraka amin'ny Android farany, Android 6.0 Marshmallow dia haseho amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny tapa-bolana, indrindra ny 29 septambra ho avy izao. Na dia tsy tonga aza izany dia mila milamina isika amin'ny famakiana ireo fivoahana avy amin'ireo loharano anatiny na tena akaikin'ny motera fikarohana Internet lehibe.
Tsy isalasalana fa Android 6.0 Marshmallow dia hanana toerana ambony mandritra ny heverina fa hetsika amin'ny 29 septambra. Seho vaovao sy rindranasa vaovao no ho ao amin'ity kinova vaovao ity. Iray amin'ireo rindranasa vaovao ireo ny fakantsary Google, izay fanavaozana ilay efa haintsika anio.
Ireo mpiara-miasa aminay amin'ny Android Police dia afaka nahazo ny fisie .apk vaovao momba an'ity rindranasa ity hahafahana mahita, amin'ny kaody, ny sasany amin'ireo vaovao mahaliana indrindra. Ity kinova vaovao ity, laharana 3.0, dia hanatsara ny fakan-tsary ankehitriny amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fampiasa izay tsy mbola nisy hatreto.
Fakan-tsary Google ho an'ny Android, isan'andro miaraka amin'ny safidy maro hafa
Iray amin'ireo toetra mampiavaka azy ireo ny vaky marani-tsaina. Ny ataon'ity fampiasa ity amin'ny ankapobeny dia ny maka sary haingana be mandra-pijanonan'ny mpampiasa ny fitifirana. Raha vantany vao nalaina ny sary dia namboarina ireo ary ny sasany hamafana ary ny sasany kosa hotehirizina, arakaraka ny kalitaony, raha afindra izy ireo na tsia, sns ... Ny sasany amin'izy ireo dia hosafidiana ho sary Auto-Awesome na animated GiF's.
Endri-javatra iray hafa izay afenin'ny kinova Android fakantsary ho avy dia ny antso famoronana. Izy io dia hitovy amin'ny iray izay misy ao amin'ny Google Photos amin'izao fotoana izao, na dia amin'ity indray mitoraka ity aza dia hampidirina mivantana ao amin'ny fakan-tsary Google izany nefa tsy mila mampakatra ireo sary ao amin'ny Google Photos mba hisy ny vokany.
Ireo tovolahy avy amin'ny Android Police dia naneho hevitra fa ankoatr'ireo vaovao ireo, Google dia nanomana fahagagana hafa izay mbola tsy voavakiny. amin'ny Android 6.0 Marshmallow Ho tonga ihany koa ny rindranasa fakantsary nohatsaraina, na dia tsy azonay aza fa tsy manana safidy matihanina bebe kokoa ity rindranasa ity hahafahana maka sary amin'ny fikitihana matihanina kokoa. Na izany aza, mbola kely sisa ny mahita ny vaovao farany izay niasan'ny tovolahy avy ao Mountain View ao amin'ny kinova vaovaon'izy ireo ho an'ny rafitra fiasan-dàlan'ny finday. Ho hitantsika raha mamoaka ny fanavaozana vaovao i Google aorian'ny na alohan'ny fampisehoana heverina. Manantena aho fa hivoaka haingana kokoa fa tsy taty aoriana satria te hanandrana ilay mamy matsiro nomanin'ny motera fikarohana ho an'ireo fitaovantsika izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fakan-tsarin'i Google dia mety hampiditra fitifirana mahery vaika, famoronana ary vaovao maro hafa
Ny Galaxy S7 dia hita miaraka amin'ny Exynos 8890 amin'ny mari-pahaizana vaovao